Muuri News Network » MD: Shariif xasan oo Maanta Booqdey xarunta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee koonfur galbeed.
MD: Shariif xasan oo Maanta Booqdey xarunta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee koonfur galbeed.
Kormeerka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan uu manta ku sameeyey xarunya laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee koonfur galbeed waxaa ku wehelinayay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed,xildhibaano ka tirsan dowlada dhaxe iyo kuwa maamulka.
Madaxweynaha iyo xubnaha kormeerka ku wehelinayay ayaa waxaa xarunta lanta socdaalka oo shaqo xiligaas ka socotey kuso wariiyey Agaasimaha laanta socdaalka cali maxamed cali dhuux,waxaana kormeerka kadib ugu horeyn fafaahin ka bixiyey sida xarunta u howlgaleyso Agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee koonfur galbeed.
Xildhibaan ibraahin yarrow oo barlamaanka soomaaliya ka tirsan iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maxamed sheikh xasan xamud ayaa ka Hadley.
Madaxweynaha maamulka konfur galbeed shariif xasan sheikh aadan sheegay in mamulkiisa uu ku guuleystay in bulshada koonfur galbeed halkii basborada ay u aadi jireen muqdisho hada baydhabo la helayaan.